Iindaba - I-PMI yokuvelisa kwihlabathi liphela yayiyi-57.1% ngo-Epreli, iphelisa ukunyuka kabini ngokulandelelana
Ukuveliswa kwehlabathi kwe-PMI kwakuyi-57.1% ngo-Epreli, ephelisa ukunyuka okulandelanayo
Ngokwedatha ekhutshwe yi-China Federation of Logistics and Purchasing ngomhla we-6, i-PMI evelisa umhlaba wonke ngo-Epreli yayiyi-57.1%, ukwehla kwenani leepesenti ze-0.7 ukusuka kwinyanga ephelileyo, kuphele inyanga ezimbini ukuya phezulu.
Isalathiso esibanzi sitshintsha. Ukuveliswa kwe-PMI kwehlabathi kwehle kwinyanga ephelileyo, kodwa isalathiso sihleli ngaphezulu kwe-50% kwiinyanga ezili-10 zilandelelana, kwaye ibingaphezulu kwe-57% kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo. Ibikwinqanaba eliphezulu kule minyaka idlulileyo, nto leyo ebonisa ukuba izinga lokukhula kweemveliso ezikhoyo ngoku, nangona kunjalo, indlela esisiseko yokubuyela kwimeko yesiqhelo ayitshintshanga.
I-China Federation of Logistics and Purchasing yathi ngo-Epreli, i-IMF iqikelele ukuba ukukhula koqoqosho kwihlabathi jikelele ngo-2021 no-2022 kuya kuba yi-6% kunye ne-4.4%, ngokulandelanayo, eziyi-0.5 kunye neepesenti ezingama-0.2 eziphakamileyo kunengqikelelo ngoJanuwari kulo nyaka. Ukukhuthazwa kwezitofu kunye nokuqhubela phambili okuqhubekayo kwemigaqo-nkqubo yokuvuselela uqoqosho kumazwe ahlukeneyo zizinto ezibalulekileyo ekubhekiswa kuzo ze-IMF ukwandisa ukukhula koqoqosho.
Nangona kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba kusekho izinto eziguqukayo ekubuyiseni uqoqosho lwehlabathi. Eyona nto inefuthe elikhulu kukuphindaphindeka kwesifo. Ulawulo olusebenzayo lwendyikitya yokufa luseseyinto efunekayo ukuze kubuyiselwe uzinzo nozinzo kuqoqosho lwehlabathi. Kwangelo xesha, umngcipheko wokunyuka kwamaxabiso kunye nokunyuka kwamatyala okuziswa ngumgaqo-nkqubo ongahambelaniyo wemali kunye nokwandiswa kwemali nakho kuyaqokelelana, kube ziingozi ezimbini ezifihlakeleyo kwinkqubo yokubuyiselwa koqoqosho lwehlabathi.
Ukusuka kumbono wengingqi, ezi zinto zilandelayo zibonisiwe:
Okokuqala, izinga lokukhula kwemveliso ye-Afrika yehle kancinci, kwaye i-PMI yehle kancinci. Ngo-Epreli, i-PMI yokuvelisa i-Afrika yayiyi-51.2%, ukwehla kwepesenti ye-0.4 ukusuka kwinyanga ephelileyo. Izinga lokukhula kweshishini lokuvelisa laseAfrika linciphise kancinci ukusuka kwinyanga ephelileyo, kwaye isalathiso besingaphezulu kwe-51%, sibonisa ukuba uqoqosho lwase-Afrika lugcine imeko yokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Ukuqhubekeka nokwazisa ngokugonya inyumoniya entsha yesithsaba, ukukhawulezisa ulwakhiwo lommandla worhwebo olukhululekileyo kwilizwekazi laseAfrika, kunye nokusetyenziswa ngokubanzi kwetekhnoloji yedijithali kuzise inkxaso eqinileyo ekubuyiseni uqoqosho lweAfrika. Imibutho emininzi yamazwe aphesheya iqikelela ukuba uqoqosho lwe-Afrika esemaZantsi eSahara luya kuthi chu luye kwindlela yokubuyela kwimeko yesiqhelo. Ingxelo yakutshanje ye "Pulse of Africa" ​​ingxelo ekhutshwe yiBhanki yeHlabathi iqikelela ukuba izinga lokukhula koqoqosho kumazantsi eSahara e-Afrika kulindeleke ukuba lifike kwi-3.4% ngo-2021. Qhubeka nokudibanisa ngokubonakalayo kuphuhliso lwesixokelelwano semizi-mveliso sehlabathi. kwaye ixabiso lisisitshixo sokubuyiswa okuzinzileyo kweAfrika.
Okwesibini, ukubuyiselwa kwemveliso yaseAsia kuzinzile, kwaye i-PMI iyafana nenyanga ephelileyo. Ngo-Epreli, i-PMI yokuvelisa i-Asiya yayifana nenyanga edlulileyo, ukuzinza kwi-52.6% kwiinyanga ezimbini ezilandelelanayo nangaphezulu kwe-51% kwiinyanga ezisixhenxe ezilandelelanayo, kubonisa ukuba ukubuyiswa kwemveliso yaseAsia kuzinzile. Kutshanje, iQonga le-Boao leNkomfa yoNyaka yase-Asia ikhuphe ingxelo yokuba i-Asiya iya kuba yinjineli ebalulekileyo ekuvuseleleni okuzinzileyo kwehlabathi, kwaye izinga lokukhula kwezoqoqosho kulindeleke ukuba lifikelele ngaphezulu kwe-6.5%. Ukubuyiselwa okuzinzileyo kunye nokuzinzileyo kwamazwe athile asaphuhlayo amelwe yi China kubonelele ngenkxaso eyomeleleyo ekubuyiseni uzinzo kuqoqosho lwaseAsia. Ukomelela okuqhubekayo kwentsebenziswano yengingqi e-Asiya kukwaqinisekisa uzinzo lwecandelo lezamashishini laseAsia kunye nonikezelo lwentengiso. Kwixesha elizayo elingekude, ukonyuka kobhubhane eJapan naseIndiya kunokuba nefuthe lethutyana kuqoqosho lwaseAsia. Kuyimfuneko ukuba unikele ingqalelo ekusasazeni, kuthintelo nasekulawuleni ubhubhane kula mazwe mabini.
Okwesithathu, izinga lokukhula kweshishini lokuvelisa laseYurophu liqhubekile nokukhawulezisa, kwaye i-PMI inyukile kwinyanga ephelileyo. Nge-Epreli, i-PMI yokuvelisa i-Europe inyuke nge-1.3 yepesenti ukusuka kwinyanga ephelileyo ukuya kwi-60.8%, eyayinyuka ngenyanga kwinyanga ezintathu ezilandelelanayo, ibonisa ukuba izinga lokukhula kwemizi-mveliso yaseYurophu liqhubekile nokukhawuleza xa kuthelekiswa nenyanga ephelileyo. , kwaye uqoqosho lwase Yuropu lusalugcinile uhlengahlengiso olomeleleyo. Ngokombono wamazwe aphambili, i-PMI yemveliso yase-United Kingdom, e-Itali nase-Spain inyukile xa kuthelekiswa nenyanga ephelileyo, ngelixa i-PMI yemveliso yase-Jamani nase-France iye yalungisa kancinci xa ithelekiswa nenyanga egqithileyo, kodwa isala umgangato ophezulu. Phakathi ku-Epreli, ukwanda okukhulu kwamatyala e-pneumonia entsha ye-coronary kumazwe afana neJamani, i-Itali kunye neSweden kuzise imiceli mngeni mitsha ekubuyiseleni uqoqosho eYurophu. Ukuthathela ingqalelo ukuba ukuphinda ubhubhane wesithsaba esitsha kungakhokelela kwenye into ekwehliseni ukukhula koqoqosho lwaseYurophu, iBhanki eNkulu yaseYurophu kutsha nje ibhengeze ukuba izakuqhubeka nokugcina umgaqo-nkqubo wezemali ongasasebenziyo kwaye izakuqhubeka nokukhawulezisa isantya sokuthengwa kwetyala.
Okwesine, izinga lokukhula kweshishini lokuvelisa eMelika lehlile, kwaye i-PMI ibuyele kwinqanaba eliphezulu. Ngo-Epreli, i-American PMI yokuvelisa i-PMI yayiyi-59.2%, ukwehla kweepesenti ze-3.1 ukusuka kwinyanga ephelileyo, kuphelisa imeko eqhubekayo eya phezulu kwiinyanga ezimbini ezilandelelanayo, ibonisa ukuba izinga lokukhula kwemboni yokuvelisa yaseMelika iye yehla xa kuthelekiswa nenyanga edlulileyo , Isalathiso sisengaphezulu kwe-59%, sibonisa amandla ohlaziyo kuqoqosho lwaseMelika. Phakathi kwamazwe aphambili, izinga lokukhula kwishishini lokuvelisa laseMelika liye lancipha kakhulu, kwaye i-PMI ibuyele kumanqanaba aphezulu. Ingxelo ye-ISM ibonisa ukuba i-PMI yemveliso yase-US yehle ngeepesenti ze-4 ukusuka kwinyanga ephelileyo ukuya kwi-60.7%. Izinga lokukhula kwemveliso, ibango kunye nemisebenzi yengqesho konke kuye kwehla ukusuka kwinyanga ephelileyo, kunye nezalathiso ezinxulumene noko ziye zabuya umva xa kuthelekiswa nenyanga edlulileyo, kodwa zahlala zikwinqanaba eliphezulu. Ibonisa ukuba izinga lokukhula kwishishini lokuvelisa laseMelika linciphile, kodwa ligcina imeko yokubuyisa ngokukhawuleza. Ukuze uqhubeke nokuzinzisa imeko yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, i-United States inenjongo yokuhlengahlengisa uhlahlo-lwabiwo mali kunye nokunyusa inkcitho engakhuseliyo enje ngemfundo, ukhathalelo lonyango, kunye nophando kunye nophuhliso ukuphucula amandla oqoqosho ngokubanzi. Usihlalo weFederal Reserve uqinisekile malunga nokubuyiselwa koqoqosho okulindelweyo e-United States, kodwa waphinda wagxininisa ukuba isoyikiso sentsholongwane entsha sisekhona kwaye nenkxaso yomgaqo-nkqubo eqhubekayo isafuneka.